Daawo:- DFS oo beenisay in Qatar ay kaga shakisan tahay taageerida argagxisada Somalia. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeFaalloyinkaDaawo:- DFS oo beenisay in Qatar ay kaga shakisan tahay taageerida argagxisada Somalia.
Daawo:- DFS oo beenisay in Qatar ay kaga shakisan tahay taageerida argagxisada Somalia.
July 30, 2019 marqaan Faalloyinka, Maqal Iyo Muuqaal, Soomaliya, Wararka maanta 0
Deni iyo Karaash oo Garoowe kula kulmay gudoomiyaha baarlamaanka Somalia.
Daawo:- Amniga Puntland oo si balaadhan loo sugayo iyo wufuud ku qulqulaysa caasimadda Garoowe.